TCDD ve Bağlı Ortaklıklarında Çalışan Taşeron İşçiler Kadro Bekliyor – RayHaber | raillynews
[13 / 01 / 2020] Jawaabta Channel Istanbul ee Imamoglu kuna socota Wasiirka Turhan	34 Istanbul
[13 / 01 / 2020] TCDD wuxuu lumiyey 2 Bilyan 558 Milyan oo Pound sanadkii	06 Ankara
[13 / 01 / 2020] Kanaalka Channel Istanbul ee Madaxweyne Erdogan ee dhalashadiisa!	34 Istanbul
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia58 SivasTCDD iyo kaabayaasheeda
09 / 12 / 2019 58 Sivas, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, Headline, TURKEY
tcdd iyo wixii la halmaala
TCDD iyo kaabayaasheeda Abdullah Peker, Gudoomiyaha Gadiidka Shaqaalaha iyo Wadada Tareenka, wuxuu sameeyay war saxaafadeed qoraal ah oo ku saabsan qoritaanka shaqaalaha hoos udhaca ah ee 3,477 ee ka shaqeeya TCDD iyo kaabayaashiisa (TÜDEMSAŞ, TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ).
Bayaanka qoraalka ah ee Peker waa sida soo socota; Imiz qandaraasleyaashayada ka shaqeeya dhammaan noocyada kala duwan ee shaqooyinka xarumaha dowladda iyo ururada waxay sugayaan shaqaalaha si rajo leh, Mudane Saraakiisha, xaq uma lihid inaad niyad jabsan dadkaan. Waxay ka soo horjeedaa sharciga dastuurka in aan la siinin shaqaalaha xarumaha qaar inta ay xarumaha qaar joogaan.
Astaamaha TCDD iyo kaabayaasheeda TÜDEMSAŞ, TÜLOMSAŞ iyo TÜVASAŞ waa in la siiyaa xuquuqda shaqaalaha si deg deg ah dhammaan qandaraasleyaasha si looga hortago khasaaro maaliyadeed iyo mid niyadeed.
Ma jiro xarun ka sarreysa oo ku kala duwan hay'ad kale. Xaqiiqdii, qandaraasleyaal ka shaqeeya TCDD iyo TÜDEMSAŞ, TÜLOMSAŞ iyo TÜVASAŞ waxay ka shaqeeyaan shaqooyin culus oo halis badan marka loo eego hay'adaha kale.
Gobolka waxaa ka jira sii wadid, qandaraasleyaasha ka shaqeeya hay'ad walba waa inay lahaadaan xuquuq isku mid ah iyo shuruudo isku mid ah.
Dadkani, oo qaata mushaharkooda ugu hooseeya ee mushaharka ah isla markaana isku dayaya inay ku noolaadaan nolol-yaraan, ayaa ah dadka difaaca dalkooda aagagga July.
Mushaharka qandaraas hoosaadyada waa inuu ahaadaa ugu yaraan 3000 Tl. Mushaharka shaqaalaha tareenka waa in loo qaataa sidii sal sare. Tani waxay u baahan tahay fahamka gobolka bulshada. ”
Shaqaalaha subcontract ee ka shaqeeya wadooyinka waaweyn
Qandaraaslayda shaqaalaha ah ee ka shaqeeya wadooyinka waaweyn
IZBAN Shaqaalaha Qandaraaska
Shaqaalaha shaqaalaha ayaa ka shaqeynaya waddooyinka?
Shaqaalaha ka shaqeeya qaybta wadooyinka waaweyn
Sugitaanka sugitaanka shaqaalaha shaqaalaha ee ka shaqeeya wadooyinka waaweyn
Shaqaalaha qandaraaska ku leh Corum
Shaqaalaha shirkadaha wax soo saarka ah ee ka shaqeeya qaybta dadweynaha waxaa lagu bixin doonaa Amar
Qeybaha TCDD ee ka shaqeeya mashruuca 4 ma heli karaan waxtarka
Shaqaalaha ku meel gaarka ah ee ka shaqeeya TCDD waxay rabaan shaqaale
Shaqaalaha ammaanka ee khaaska ah ee ka shaqeeya IZBAN waxay la kulmayaan kalsooni shaqaale
TCDD Shaqaalaha Qandaraaska ah ayaa la diray
Rabshadaha Mushaharka ee Shaqaalaha Qandaraaslaha ayaa kasii wada TÜVASAŞ
TCDD iyo asxaabteeda 26. Waqtiga Heshiiska Shaqaale ee Heshiis Wadareed
Mushaharka shaqaalaha wadooyinka tareenka
Gaadiidka iyo midowga shaqaalaha tareenada
Taageerada Turkiga ee Horumarinta ee Malaysia Airlines
Telefishanka Olympos wuxuu u dabaaldegay xilli wanaagsan
RayHaber 13.01.2020 Warbixinta Shirka
TCDD wuxuu lumiyey 2 Bilyan 558 Milyan oo Pound sanadkii
Kanaalka Channel Istanbul ee Madaxweyne Erdogan ee dhalashadiisa!
Shilka shilka YHT wuxuu dilayaa 9 qof oo maanta bilaabatay
Maanta oo Taariikh ah: 13 Janawari 1931 Atatürk oo ku taal Malatya
Wasiir ku xigeenka Gaadiidka Adil Karaismailoğlu ayaa ku sugan Marmaray
Wasiirka Turhan: 'Channel Istanbul Waa Mashruuc Kiro'
Eskişehir wuxuu rabaa inuu cod ku yeesho Nidaamka Tareenka oo leh 'Model Wadajir'
Sheegashada Channel Istanbul ee Bakhtiinta